Hanorambaratra hatrany any avaratra andrefanan’ny Nosy sy ny ilany andrefan’ny atitany ka mety ho betsaka ny rotsak’orana indraindray. Oram-pahavaratra mahazatra ny any Bongolava, ny Menabe ary ny manodididna ny tangoron-tendrombohitra Analavelona.
Any amin’ny ilany atsinanan’ny atitany kosa, hisy andro maina anatin’ny andro vitsy fa vinavinaina hiverina indray ny orana any amin’ny faran’ny herinandro any.
Hisy fidinana arahina fiakarana kely ny maripana ambony raha ny eto afovoan-tany manokana ato anatin’ny andro vitsy ho avy izao. Ny maripana ambany, eo anelanelan’ny 16 – 26°C ary ny maripana ambony, ao anatin’ny 26 – 35°C.
Niverina eny amin’ny tokantrano nanalana azy indray ireo fianakaviana monina eny amin’ny tanàna avo ka nafindra toerana vonjimaika amin’ny toerana roa. Tsy nahafapo azy ireo ny toetoetry ny trano handraisana azy ireo sady tsy misy ny jiro sy ny rano ka nanano sarotra ny fijanonana teny, araka ny fanazavan’ny solontenan’ny mponina. Miandry ny vahaolana maharitra avy amin’ny tomponandraikitra anefa izy ireo fa manaiky ny fandaminana hatrany. Misy ampahany (tokantrano roa) amin’izy ireo kosa, nijanona noho ny tsy fananana trano hafa hivantanana.
Mbola betsaka ny faritra feno rano, omaly, vokatry ny rotsak’orana vao maraimbe ary naharitra ora maromaro. Sahirana ny mpampiasa lalana vokatr’izany satria fefika rano ny lavaka ka mila mitandrina. Vokany, nitohana indray ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra, omaly, ary nampimenomenona ny olona maro hamonjy asa sy fianarana. Ny Apipa kosa, nanambara fa tsy mbola misy ahina ny fiakaran’ny renirano mandalo amin’ny lemak’Antananarivo.